Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Trinidad and Tobago » TTAL si loo kala duwo badeecada dalxiiska ee Tobago oo leh nacas caafimaad
Ancil Dennis, Xoghayaha Sare ee Tobago iyo Xoghayaha Dalxiiska, Dhaqanka iyo Gaadiidka
Khariidadda Hay'adda Dalxiiska ee Tobago Limited's Roadmap for Growth 2020 - 2023 waxay qeexday baahida loo qabo in la sahamiyo horumarka niche cusub iyo kala-duwanaanta, iyo sidoo kale taageeridda iyo dib-u-cusbooneysiinta niche-yada jira.
Dalxiiska fayoqabka ayaa qofka caafimaadkiisa iyo fayoobaankiisaba galiya xudunta u ah khibradooda safarka.
Dalxiiska fayaqabka dalxiiska ayaa loo aqoonsaday inuu yahay ikhtiyaar macquul ah oo loogu talagalay in lagu horumariyo wax soo saarka tayada dalxiiska ee tayada leh
Hay'adda Tobago waxay raadin doontaa inay soo saarto nooc caafimaad oo u gaar ah oo la jaan qaadaya nooca calaamadda u gaarka ah ee bixinaya khibradaha "Beyond Caadiga ah" ee dhaafsiisan waxyaabaha caadiga ah ee caafimaadka laga bixiyo.
TobagoMasuuliyiinta dalxiiska ayaa bilaabay mashruuc saddex waji ah oo istiraatiijiyad ahaan u horumarin doona fayaqabka dalxiiska u gaarka ah meesha loo soconayo, iyadoo wajiga koowaad uu ku saabsan yahay shirweynaha dalxiiska ee soo socda ee "Sahaminta Fayo-dhowrka Dalxiiska 360" laga bilaabo 8da Luulyo.th si 9th, 2021.
Khariidadda Hay'adda Dalxiiska ee Tobago Limited's Roadmap for Growth 2020 - 2023 waxay qeexday baahida loo qabo in la sahamiyo horumarka niche cusub iyo kala duwanaanta, iyo sidoo kale taageerida iyo dib u cusbooneysiinta niche-yada jira Dib-u-qiimeynta hantida Tobago si loo hubiyo awoodda kobaca ee xilligii ka dambeeya COVID ee dalxiiska iyo safarka, dalxiiska fayaqabka dalxiiska ayaa loo aqoonsaday inuu yahay ikhtiyaar macquul ah oo loogu talagalay in lagu horumariyo wax soo saarka dalxiiska oo tayo leh.
Mudane Ancil Dennis, Xoghayaha Sare ee Xoghayaha iyo Xoghayaha Dalxiiska, Dhaqanka iyo Gaadiidka wuxuu yiri:
Waxaan ku qanacsanahay in Tobago ay leedahay dhamaan qaybaha lagama maarmaanka u ah caafimaadka dalxiiska. Hawo nadiif ah, muuqaal qurxoon, goobo cagaaran oo dabiici ah, dhaqdhaqaaqyo jireed oo aan dhammaad lahayn. Xaqiiqdii, tani waxay ka mid ahayd dhowr arrimood oo dalxiis oo Golaha Tobago ee Golaha uu ka doodayay in muddo ah hadda si loo badiyo wax soo saarka dalxiiska. Covid-19 wuxuu noo oggolaaday fursad qaas ah oo aan dib ugu dejinno. Annaga oo ka tirsan Golaha Tobago ayaan weli ka go'nayn sii wadidda deegaanka iyo bixinta kheyraadka lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo sii socoshada iyo hagaajinta soo jiidashada iyo tartanka Tobago. ”
Dalxiiska fayoqabka ayaa qofka caafimaadkiisa iyo fayoobaankiisaba galiya xudunta u ah khibradooda safarka. Safarada lagu abaabulay mabda'a dalxiiska fayoqabka badiyaa waxaa ka mid ah cunno caafimaad leh, jimicsi, daaweyn dalxiis, iyo fursado lagu kulmayo horumar guud iyo dhaqdhaqaaqyo ruuxi ah oo ay ku jiraan dhexdhexaadinta iyo yoga. Si kastaba ha noqotee, Tobago, Hay'addu waxay raadin doontaa inay soo saarto nooc caafimaad oo u gaar ah kaas oo la jaan qaadaya nooca calaamadda u gaarka ah ee bixinaya khibradaha "Beyond Ordinary" ee ka baxsan bixinta caafimaad ee caadiga ah.